Kurdistance-2 · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraDeborah Ann Dilley
Voadika ny 21 Desambra 2017 17:10 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Febroary 2006)
Oay, nandalo dia niserana indray ny herinandro iray hafa…ataoko fa mila miditra amin'ny ventin-dresaka isika izany.
Herinandro iray mampalahelo ho an'ny Firaisan'ireo Bilaogera Kiorda ity satria mangataka fiatoana ofisialy amin'ny asam-bondrona mba hifantohana amin'ny tetikasan'ny tsirairay izy ireo. Kanefa, tsy ireo bilaogim-bondrona rehetra no milona. Vao haingana izay, nanomboka hetsipanentanana ny Roj Bash! ho fanohanana an'i Marywan Halabjayi, Kiorda mpanoratra namoaka boky iray mitsikera ny toeran'ny vehivavy ao amin'ny finoana Silamo nentim-paharazana: “Sex, Sharia, Women in the History of Islam”.
Bilaogera Kiorda maromaro no nanoratra mombanà bilaogy iray vaovao avy amin'i Michael Totten izay niasa tany Avaratr'Iràka/Atsimon'i Kiordistàna, isan'izany ny Is-Ought Problem, ny From Holland to Kurdistan, ny Talk About the Passion ary ny Hiwa Hopes. Tamin'ity herinandro ity, manoratra momba ny mety ho anjara asan'ireo Kiorda Iraniana raha misy fifandirana eo amin'ny Etazonia sy Iran ny Hiwa ary mitaraina momba ny tsy fahombiazan'ireo sampandraharaha “matihanina” mpandika teny Kiorda.
Tamin'ity herinandro ity, nohadihadian'ny RojTv momba ny asany manosika ny fotokevitra Kiorda ny bilaogera Vladimir (From Holland to Kurdistan). (Manana bilaogy ihany koa ny RojTV raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo sy ny asany ianao.) Nahaliana be ny tafatafa niarahana tamin'i Vladimir, tsy tao anatin'ny media Holandey irery ihany fa tany amin'ny media Kiorda ihany koa. Maro karazana ireo hetsika manodidina ny fanentanana “Vonjeo ny Roj TV” saingy tamin'ity herinandro ity dia nanao lahatsoratra mahafinaritra momba ny asa efa vita izy ireo
Anatinà fanamarihana iray hafa: manana tantara maro ny Talk About the Passion amin'ity herinandro ity, momba ny asany tany Iraka Avaratra/Kiordistàna Atsimo, isan'izany ny andro iray nilatsahan'ny ranomandry sy ny fampisehoana farany (angamba) iarahany amin'ireo voalavo ao amin'ny trano fonenany.
9 ora izayTiorkia